Dak Pay App Download Ho an'ny Android [Fanavaozana 2022] | APKOLL
Te hitantana ny kaontinao amin'ny banky rehetra ve ianao ary hanao fifampiraharahana vola haingana? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ity fampiharana mahagaga ity, izay fantatra amin'ny anarana hoe Dak Pay App. Io no fampiharana Android farany indrindra, izay manolotra ny fomba tsotra sy mora indrindra amin'ny fandoavana vola sy ny fitantanana kaonty amin'ny banky ho an'ny mpampiasa.
Araka ny fantatrao dia misy fomba samihafa amin'ny famindrana vola erak'izao tontolo izao, izay misy ny Banking amin'ny Internet, ny E-wallet, ary maro hafa. Mampiasa ireto karazana sehatra ireto ny olona mba hamindrana vola mora sy azo antoka amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa ary ireo no fomba hanatanterahana hetsika mifandraika amin'ny vola.
Betsaka ny banky sy ny sehatra hafa, izay miteraka olana amin'ny olona amin'ny fitantanana sy ny fidirana. Noho izany, tsy maintsy mitsidika ny banky tsirairay ny olona mba hahazoana vaovao sy serivisy, izay tena sarotra ho an'ny rehetra. Sorena ihany koa ny olona noho ireny dingana lava sy sarotra ireny.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity fampiharana mahagaga ity ho anareo rehetra, izay ahafahanao manana ny fomba tsara indrindra amin'ny serivisy mifandraika amin'ny vola amin'ny sehatra samihafa. Betsaka ny endri-javatra azo idirana ho an'ny mpampiasa. Hizara ny momba izany izahay, izay midika fa afaka mijanona miaraka aminay ianao ary mahazo ny fampahalalana rehetra.
Topimaso momba ny Dak Pay App
Izy io dia fampiharana Android Finical, izay manome fandoavam-bola an-tserasera sy famindrana vola mora kokoa ho an'ny mpampiasa. Manolotra ny mpampiasa hiditra amin'ny kaonty fandoavam-bola rehetra avy amin'ny toerana iray izy ary hanao serivisy fandoavam-bola mora foana. Sehatra maimaimpoana izy io, izay manome ny serivisy sy ny fiasa ampiasaina malalaka.
Amin'izao fotoana izao, ity rindrambaiko ity dia tsy misy afa-tsy any India ihany, izay midika fa ny mpampiasa hafa dia tsy afaka miditra amin'ny endri-javatra misy an'ity fampiharana ity. Noho izany, raha tsy eto amin'ny firenena ianao izao dia aza mandany fotoana eto. Afaka mahita rindrambaiko hafa hita amin'ity tranokala ity ianao.
DakPay UPI avy amin'ny IPPB (India Post Payment Bank) dia manome sehatra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa mba hahazoana fidirana mora amin'ny banky rehetra sy hidirana amin'ny serivisy rehetra mifandraika amin'ny vola. Izy io dia manome fizotry ny fisoratana anarana, izay ahitana ny fanamarinana isa sy ny mombamomba ny tena manokana.
Noho izany, rehefa vita ny fizotry ny fisoratana anarana, ny mpampiasa dia tsy maintsy manampy kaonty banky manokana miaraka amin'izany Wallet nomerika. Izy io dia manome ny kaonty amin'ny banky rehetra voasoratra ao amin'ny laharana finday misy, izay ahafahanao misafidy mora foana. Noho izany, rehefa misafidy ny kaonty mpampiasa ianao dia afaka mahazo ny serivisy rehetra misy.
Dak Pay Apk dia manome fomba fandoavam-bola marobe, izay misy ny banky an-tserasera, DakPay, ary maro hafa. Ny mpampiasa aza dia afaka mizara vola amin'ireo isa hafa, izay ahafahan'izy ireo miditra mora foana. Manome ny mpampiasa hamindra vola amin'ny kaonty iray mankany amin'ny iray hafa.
Misy endri-javatra mahavariana maro kokoa hita ao amin'ity rindranasa ity, amin'ny alalanao no ahafahanao manamora ny fomba fandoavam-bola. Noho izany, raha te hahalala misimisy kokoa momba izany ianao dia ampidino ny DakPay UPI Apk ary manomboha mizaha ny endri-javatra rehetra misy amin'ity fampiharana ity
anarana Dak Pay
Anaran'ny fonosana com.fss.ippbpsp
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 5.0 adn Ambony
Manampia kaonty marobe
Fomba mora handraisana sy handefasana vola
Fomba maro hamindrana vola
Misy ny rafitra scan sy Pay
Tantano ny kaonty
Fiarovana amin'ny dian-tànana
Raha te-hisintona ny rakitra Apk ianao dia eo amin'ny toerana mety. Izahay dia manome ny kinova farany an'ny fampiharana ho anao rehetra. Mila mikitika ny bokotra fampidinana ianao, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Dak Pay App no ​​sehatra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa hanao famindrana vola azo antoka sy azo antoka. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary alao ny serivisy rehetra amin'ny finday Android na takelakao. Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy fikarakarana mpanjifa.
Sokajy Apps, Finance Tags Dak Pay Apk, Dak Pay App, DakPay UPI Apk, DakPay UPI avy amin'ny IPPB, Wallet nomerika Post Fikarohana